Kanjani ukuba uthole umkhuhlane? Medicine Zokuzivikela. Wadubula umkhuhlane
Izikhathi slushy - futhi ekwindla kanye kwentwasahlobo, futhi uma kuncibilika iqhwa ebusika - uyasigcina isikhathi labantu siphishekele ezihlukahlukene izifo ezibangelwa amagciwane. Umsebenzi oyinhloko umuntu ongafuni ukuchitha imali eningi ekwelashweni, futhi ukuthola iziphathimandla ukungamukeleki sokungabi khona emsebenzini, ngisho ngenxa yesizathu esihle, kuba umbuzo kanjani ukuba uthole umkhuhlane noma SARS. Ikakhulukazi ngowokuqala, ngoba, njengoba wazi, umkhuhlane ngokuvamile linikeza eziyingozi eziletha ukwelashwa okungenani eside. Okungukuthi, abangabantwana ezengeziwe imali ukumnika imithi futhi ingozi yokulahlekelwa umsebenzi ngenxa kokunyamalala isikhathi eside kakhulu.
Omunye akumelwe nje bagcine ngokufuna ukwazi indlela awutholi umkhuhlane, kodwa futhi bakwazi ukubona izimpawu ze-ke. Ngeshwa, ngisho nodokotela onguchwepheshe akusho ngaso sonke isikhathi atshele kokuhlangenwe nakho iyisifo eziyingozi ezivela ngaphansi ezinzima. Ezimweni eziningi, kusukela ekuqaleni umkhuhlane enomkhuhlane, futhi anisoze ongaphakeme-ebangeni nangaphezulu 38. Cishe esisemqoka kuyinkinga futhi myalgia - kwemisipha ubuhlungu. Ngokuvamile abantu ubheke le isimo ngamazwi athi "ithambo ubuhlungu." Kuvele uphawu lwekwengeta ukungabi khona ukukhwehlela futhi abandayo, nakuba kwezinye izimo zingase khona kakade ngenxa isimo umkhuhlane. Kunoma yikuphi, ngisho noma ungaqiniseki kwesifo (you kholwa, futhi ayikwazi ukuba ngoba abanayo nokwelapha), ngokushesha uqale ukuphuza imithi elwa namagciwane - bona kakhulu lula inkambo sifo ngokuzayo futhi kukwenze kube lula imithi yakhe.
Ngezindlela eziningi, nokuvimbela umsebenzi Umkhuhlane kuxhomeke ngokuphelele kuwe. Kukhona izenzo ezilula, ukuhambisana okuzokwenza ukunciphisa ingozi yokutheleleka:
Ukuvimbela hypothermia. esifanayo ekhaleni eqandisiwe kakhulu ukulahlekelwa phansi ukuze azivikele "bahlaseli" sisemoyeni. Vasospasm , kakhulu, akusho ukwandisa ukumelana umzimba nekhono layo ukuba simelane nokuhlaselwa Amagciwane. Akufanele futhi qedani. Ukujuluka kanye ngokucijile ostynuv wena gengelezi amasango ezihlukahlukene nezifo.
Qiniseka zikhulisa izinyawo. Inani elikhulu of kwalapho eziqukethwe izinyawo, unesibopho okubandakanya isimo mucosa acinene. Yebo, nezinye "izintelezi", edonswa imilenze eqandisiwe (isib, izinso izinkinga), wena kusobala akudingeki.
ukuphefumula acinene. Okokuqala, umoya edabula ekhaleni, sekuqala ukufudumala kahle. Okwesibili, omningi ayingozi labetibambile "cilia" yakhe. Okwesithathu, zonke izinhlobo laryngitis kuhambisana futhi umkhuhlane, ngoba umzimba iba buthakathaka.
ngokuqapha Okuthintekayo: ungazami nyakazisa izandla, ukuqabulana, ngokuthinta, ngezandla zakhe, ubuso bakhe.
Ukuncishiswa yokuba nezindawo zomphakathi. Futhi akusiwona nje ukwenqaba ukuvakashelwa nemibukiso, ukusebenza nokunye. D., Kodwa ukusebenzisa amabhasi, trolley amabhasi kanye komhlaba, lapho ematfuba kokuhlangana umuntu ogulayo kakade eliphezulu kakhulu. Uma uhamba ambalwa izitobhi - kungcono ukuhamba. Hamba nhlobo usizo, futhi uzuze ngokwengeziwe kulabo awakhathazeki umbuzo indlela yokugwema umkhuhlane.
izinyathelo zokuzivikela ekhaya emsebenzini
Yini ngokukhethekile ephikelela SaNPiN: nokuvimbela Umkhuhlane kuzomele sifake izindawo njalo nokucubungula lapho isikhathi eside kuba umuntu noma iqembu labantu. Kubaluleke kakhulu kulesi sici, yokuhlanza ezimanzi, futhi kufanele banganakwa ekhaya, futhi kufanele kwenziwe kaningi ngangokunokwenzeka. Ngaleyo ndlela zakhukhula futhi iwukudambisa igciwane imali ezindaweni. ukupholisa njalo futhi kakhulu ukunciphisa ingozi yokutheleleka, nakuba ezinhle inqubo enjalo kufanele sigcwaliswe hhayi ihora, futhi ngemva thimula elilodwa ababekhona. Kodwa, njengoba kubonakala kungenakwenzeka ukukwenza okungenani izikhathi ezintathu ngosuku.
Phakathi kubhubhane imithi yokuvimbela incoma ukuthi njalo ugeze izandla zakho ngemva kokuba "emphakathini." Izizathu ukuthi umkhuhlane idluliselwa udabula emoyeni, kunokuba ethintekayo, ayilungile kakhulu: Khetha amagciwane emoyeni kuxazululwe on wonke evele. Ikakhulu, i-banisters futhi handrails. Ukuthinta endaweni enjalo, bese - kumuntu buthule ukwenza emzimbeni wakho lwegciwane nobutha. Uma ungeke ukwazi izandla kaningi ngokwanele, baphathe olumanzi usula isinqandakuvunda futhi uwasebenzise ngemva kokukhululwa kwe-noma isiphi isikhala yomphakathi - kusukela ezokuthutha kuya esuphamakethe.
zokuvimbela Ofanele Umkhuhlane e abadala kanye nezingane, futhi kuhlanganisa egeza njalo sigqoke izingubo zangaphansi kuphela izinto. Amagciwane e nezicubu kungaba impela isikhathi eside ukuze silondoloze infectivity ngemva kokuba hit on wakhe.
Ephambi kwezinduna umkhuhlane, kuyatuseka ukusebenzisa amaduku zalutho. Asikho isidingo ukuthwala ephaketheni lakho amakoloni bacterium ngokuzithandela ukubuyela kubo emzimbeni wakho.
Kunemithi ezithile ukuthi imithi yokuvimbela weluleka ukusebenzisa phakathi umqedazwe. Esinye sezipho ezinhle kakhulu izindlela ukuvimbela ukutheleleka kubhekwa ukugeza ekhaleni ngemva "ukushayisana" ngasinye eziningi abantu. Ngenxa yalesi ukulingana saline evamile, futhi amanzi anosawoti afudumele. Nokho, kunezithiyo ezimbili:
ngaso sonke isikhathi nethuba ukuqhuba inqubo enjalo (Nokho akuwona wonke umuntu onesibindi ukugeza ekhaleni phakathi kosuku);
uma unomkhuhlane, lokhu zokukhwabanisa kungaba yingozi.
Ngakho ukuwasha okufanele sidingidwe isikhungo ekuseni nakusihlwa. Futhi ngakho emini ukuze uzivikele ukuhlaselwa igciwane, kubalulekile ukuba gcoba amavesi acinene wamafutha oxolinic - idala ngempela isithiyo okuthembekile lamagciwane. Ungase futhi uqale ukuphuza immunostimulants at Lobhubhane kanye zokuvimbela esenikwe izidakamizwa elwa namagciwane (uma izimvume ezempilo, futhi kuphela emva kokubonisana udokotela wakho).
Ungakhohlwa mayelana imaskhi oyisivikelo. Uma une isikhathi kuyodingeka ichithe ama phakathi inombolo enkulu abantu ukuyisebenzisa ngaphandle kokungabaza. Impilo kuyabiza. Futhi uma ehhovisi lakho langena "imaski Imodi" - ingangqubuzani ke ngenxa yezizathu yobuhle. Isiguli njengoba uyobheka sibi ngempela.
Ezokudla ngezikhathi Umkhuhlane
Ekucubunguleni "kanjani ukuba uthole umkhuhlane," uku bephikisana kuphakama mayelana ukunikezela. Kukholakala ukuthi ngesikhathi lo mqedazwe ukuze ube ngumngane ka imifino. Futhi kule minyaka yamuva, lo mbono buthola abalandeli abaningi. Nokho, umsebenzi ophambili imithi yokuvimbela sebekubeke engavumelani. Kunalokho, yena weluleka e umkhuhlane ngaso sonke isikhathi ukuba alahle konke izinhlobo ukudla kanye udle ukunconywa futhi egcwele. Phakathi nezinyanga zasebusika umzimba nokunye uchitha owawudinga amandla okumelana nezimo ezinzima. Ukuphuca kuye we "fuel" olusebenza ngokugcwele - kusho ukusenza buthaka ekuphileni kwakhe. Into kuphela ukuthi izingxenye futhi "straights" futhi "alternativschiki" ngoba isidingo ukulahla noma okungenani ukuthi ubeke umkhawulo ekusetshenzisweni kwanoma iyiphi utshwala. Utshwala kwehlisa amandla somzimba sokuzivikela.
Umkhuhlane ejenti zokuvimbela kungenziwa elalibhalwe kanye humidifier umoya. Acinene mucosa buthakathaka kakhulu omiswe yayo. Ingcikitsi Ukushisa kurediyetha egijima emoyeni desiccate Into ephawuleka kakhulu.
Lokhu kungenzeka futhi ihlanganisa ukulungiswa Ukushisa amabhethri, uma enikeziwe ekhaya lakho. sezulu Too hot in the efulethini buphikisana ngaphandle abandayo. Kusukela enjalo iconsi abukhali ungavele umkhuhlane; ngaphandle, kuyilapho, futhi, kuthinta mucosal ngakhoke, ikhono lakho ukumelana Umkhuhlane ubhadane lwezifo.
Ukugonywa: Izinzuzo nezingozi nebubi
Nokho, imithi esemthethweni ukholelwa ukuthi zonke lezi zindlela - kuphela nengxenye-ngesilinganiso. Okuwukuphela thuba e ekuxazululeni impikiswano "kanjani ukuba uthole umkhuhlane" kuyinto lokugoma ngokumelene nalo. Abantu abaNsundu babekholelwa ukuthi ukuhamba ukuphikisa ezithile ngokugoma. I onohlonze iningi labo - kuguquka okusheshayo kwegciwane ukuvela nesigqi esisha. Ngosuku lwesibili phakathi agumenti - ingozi yokugoma ibe lapha. Kodwa eqinisweni, lwemithi ephephile athuthukile engaphezu kwamashumi amahlanu edlule. Yebo, abanayo ngemigudu yokulwisana umkhuhlane, kodwa kungenye into ehluke kakhulu ngempumelelo yokulwa nesigqi ezine ezivamile futhi "ezinolaka". Futhi ithonya asele buthaka appreciably, okwenza lesi sifo kulula futhi cishe eqinisekisa ukungabi khona izinkinga. lokugoma Zokuzivikela ngaleyo ndlela ngeke aqinisekise xhumelela cishe sasiyikhulu namashumi amaphesenti. Ukuze isigaba sabantu ubani okufanele bayigweme, singasho sithi kuphela kulabo okwamanje kakade has ezinye izinkinga zempilo, njengesifo umkhuhlane noma muva abake baba nezifo.
Ubani musa ukulahla yokugoma
abantu abadala abanempilo, yebo, kungaba ezingezwakali. Nokho, imikhakha sengozini iningi labantu leli is hhayi Kunconywa. Lezi zihlanganisa:
Abafundi bachitha isikhathi esiningi phakathi inombolo enkulu abantu;
izingane, kusukela ezinyangeni eziyisithupha ubudala futhi kuya eminyakeni emihlanu - banayo ukumelana Umkhuhlane namanje ngempela ongaphakeme;
abadala 65 futhi abadala abanokuhlangenwe ukungatheleleki ongaphakeme ngenxa yobudala babo. Ngisho noma wokugoma ngeke ukuvimbela isifo, zizonciphisa namandla aso;
izintokazi "endaweni". Zazisa wokugoma esimweni inactivated, ukuze ingozi embungwini incane - Ngokungafani nemiphumela ezingase zenzeke uma isifo;
othisha, odokotela, abashayeli, nabathengisi - bonke labo, uchwepheshe has ukuxhumana nabantu abahlukene;
Abantu nge njalo: lokhu kusikisela ukuthi izivikeli mzimba, nokunye awayona ezingeni ukuze ukubamba umkhuhlane nethuba elikhulu.
Ungakhohlwa ukuthi umuthi wokugoma kuthinta nokudlondlobala Umkhuhlane kuphela. Kusukela nezinye izinhlobo acute izifo zokuphefumula futhi sibi zokuphefumula izifo ezibangelwa amagciwane it is ukuthi babenokwesaba ngokuzokwenzeka.
Lokho leluleka abantu: zokuvimbela
Usizo Good ekuvimbeleni kungenzeka khambi Folk ngoba umkhuhlane. Kuphela benza Yiqiniso, akudingekile, Nokho, futhi uzibe - kakhulu. Indlela ephumelela kakhulu futhi kungase kutholakale ngale ndlela:
A yesine amakhilogramu uju ehlangene juice enhlaba. Wafaka abandayo izinsuku ezingu-10, baphuze ngenyanga yokuzila ukudla: abadala etafuleni, izingane - isipuni.
I okuxubile amanani alinganayo amabhilikosi, uju, walnuts nelithi ulamula. Umuthi ligcwele izinsuku 5 futhi ulisebenzise ekuseni ngaphambi sokulala ku ngesipuni.
Ngo 3 amalitha amanzi abilisiwe imizuzu 20 ikota kilogram of rosehip omisiwe. Ukuphuza yisiphi isamba itiye esikhundleni.
Enokwethenjelwa kakhulu ngazo zonke izikhathi ayebhekwa garlic kusukela umkhuhlane. Ungadliwa naye - ezihlukahlukene kakhulu. Nazi ezimbalwa:
Kuliminyanise 3-4 clove garlic, ngesikhathi esifanayo e ingilazi fresh isanqante juice, futhi izinsuku ezinhlanu for isigamu sehora ngaphambi kokudla kudliwe ingxenye inkomishi izidakamizwa.
10 ulamula isuswe ithambo (ikhasi ngakwesokunxele); ezisawolintshi fake ukukuthinta. 10 amakhanda garlic silandelwe zibe izingxenye futhi ecindezelwe. Bobabili uquqaba zihlangene, buhlanjululwe 3 amalitha amanzi wafaka. Phuza umuthi kabili ngosuku (esiswini esingenalutho!) Ukuze ngesipuni enkulu.
Ukuhlanganisa amakhambi abantu ngokumelene Umkhuhlane ne izincomo umuthi olusemthethweni, kungenzeka ukuba sisinde inkathi Umkhuhlane ngaphandle uthuthumele futhi umonakalo empilweni.
Indlela ukuhlanza emaphashini kusukela accumulations ezingadingekile
Kuthiwani uma kushiswe ilanga? Amathiphu Olungokoqobo wazibonela
Thyroxine futhi triiodothyronine kuthiwa kwemiqondo ngesisekelo salokho? Ama-hormone egilo - thyroxine futhi triiodothyronine
Valery Kryuchkov nesimiso sakhe "Umcibisholo"
Izipho engajwayelekile amadoda (isithombe). imibono ezithakazelisayo futhi ezintsha
Thanthip Beach Resort Indawo abantu 3 * (Thailand / Phuket): incazelo kanye nokubuyekeza
Inani okuthiwa Violet, noma kanjani ukuqonda lona wesifazane
Indlela ukubeka izingcaphuno isithonjana (copyright)
Steeplejacks: izici intambo
Ukuncela futha ngoba amanzi: Ukucaciswa nokubuyekeza (isithombe)
Izidakamizwa "postinor" ngoba kokuphazamiseka yokukhulelwa ekuseni
Ubuhle yobuciko "Quilling". Izimbali, amaphethini, Monograms ukuhlobisa ingaphakathi
Indlela owasungula Empire Mongol